Akụkọ - Nzukọ ndị isi na ndị na - ekenye ndị ọzọ nzukọ nke BEIJING SHOUGANG GITANE NEW MATERIALS CO., LTD emere nke ọma na 2020
Nzukọ ndị nduzi na nzukọ ndị na-eketa òkè nke BEIJING SHOUGANG GITANE NEW MATERIALS CO., LTD emere nke ọma na 2020
Na October 16, ndị isi oche nke anọ na nzukọ 17 n'ozuzu nke ndị na-eketa òkè nke BEIJING SHOUGANG GITANE NEW MATERIALS CO., LTD nwere ihe ịga nke ọma na ụlọ nzukọ nke ụlọ ọrụ ahụ. Li Chundong, osote onye isi njikwa nke ụlọ ọrụ nha nha, ndị isi, ndị nlekọta na ndị nnọchi anya ndị ọzọ bịara nzukọ ahụ. Li Gang, onye odeakwụkwọ nke Kọmitii Party, onye isi oche na onye isi nchịkwa na-elekọta nzukọ ahụ.
Na 2020, ndị isi oche na nzukọ ndị na-eketa òkè tụlere ma gafere mkpebi nke nzukọ ahụ.
Na nzukọ izugbe nke iri na asaa nke ndị nwe ụlọ ọrụ ahụ, Comrade Li Gang kwuru okwu ihu ọha pụrụ iche na mmecha nke ihe ngosi azụmahịa dị iche iche na ụzọ atọ mbụ nke 2020, wee mee atụmatụ maka nkeji nke anọ iji hụ na emechara ihe niile na ọrụ niile. n'ime afọ, ma tọọ ntọala dị mma maka mmepe na 2021.
Li Chundong kwenyesiri ike na ihe ngosi azụmahịa nke GITANE, njikwa ụlọ ọrụ, njikwa ihe egwu, iwulite talent, na iwu ụlọ ọrụ na 2019. Na-elekwasị anya na ngwụcha ọrụ nke ụlọ ọrụ GITANE na ụzọ atọ mbụ nke 2020, Comrade Li Chundong kwuru na n'okpuru ọnọdụ ọrịa ahụ. afọ a, site na nkwonkwo aka nke ndị otu ndu GITANE, ndị niile nwere oke na ndị ọrụ niile, rụzuru ọrụ azụmaahịa ugbu a, na mmezu adịghị mfe inweta. Na akụkụ nke enterprise management, ọ rụrụ a otutu ọrụ, ifịk ifịk agwa ndị ọchịchị ngalaba, na ghọrọ ihe ume ume ịzụlite na Changping District; rụrụ usoro nhazi maka ndị ọrụ niile; arụsi ọrụ ike dozie nsogbu fọdụrụ site n'akụkọ ihe mere eme; wuru ebe ndi oru ohuru ga-eme ka ndi oru ndi mmadu megharia ndu ndu ha, nke mekwuru ka ndi oru were nwe uche na ebumnuche nke ebumnuche nke ulo oru.
Electric okpomọkụ Waya, N'ogbe High okpomọkụ Ọdụdọ Waya, Electric Heating mmewere Waya Supplier, Electric eguzogide Waya, Electric Heating Waya, Okpomọkụ eguzogide ọgwụ Ọdụdọ Waya,